Chii chinogona kundibatsira kuti ndikudze chigadzirwa changu pa Amazon?
Pamwe chero purogiramu yekushanda inoshandiswa (kusazvidza mamiriro ayo emakambani) kunogona kuvandudzwa zvikuru nedzimwe nyanzvi dzishandiso kana ruzivo rwakanyatsogadzirirwa kubatsira. Kuramba bhizinesi rako-kutengeserana mabhizinesi kuAmazon haisi kuregererwa mubhuku iri-brainer. Uye kana zvasvika pakupa tsvina kune yako yakagadziriswa kuAmerica, pfungwa inokosha pano iri kuita zvakanakisisa kuti ugare pamwe chete nemasimboti chaiwo - izvo zvaizodiwa kuti uchengetedze mari yako zvakaderera sezvinogona, kwenguva yakati. Nenzira iyo, kana bhizinesi rako richiva rekubatsira, nguva yakakwirira iwe wakawedzerwa kubudirira kwayo uye mari inokonzera mikana yekuwedzera. Saka, pasi apa ndiri kuenda kuzokuratidza zvimwe zvezvigadzirwa zvangu zvakanakisisa-zvishandiso uye software zvinogona kukubatsira kuti uvandudze mutengo uri kuAmazon uye ufare nguva dzose uchitsvaga kutengesa kupfuura nguva. Pano ivo - consejos para tomar fotos en blanco y negro.
Nzvimbo dzepamusoro dzinofanira kunge dzakagadziriswa uye dzinoshandiswa pakugadzirwa kweMicrosoft
paAmazon, kunyanya kudhinda mavara ako pachako kune imwe neimwe ichangobva kuwedzerwa chinhu chinowanikwa mune yako yekuverenga. Inventory Lab yakakoshawo pakuchengeta purogiramu pane imwe neimwe ye SKY inobatsira iwe kutumira kuAmazon. Chii chinowedzera - basa iri ndere kunyatsogadzirisa kugadzirisa uye kubhengetedza. Asi izvi hazvireve kuti iwe unofanira kuzvishandisa kumitero. Kana ndiri ini, basa iri raive rakanaka pakuongorora mari yangu yemazuva ano "mari" inobhadhara mari inoita kuti kugadziriswa kunokosha chero nguva yandinoda.
Ebates inouya sechikwata chekutsvaga kuti iwe uwane rubatsiro rwakanyanya kuburikidza nekushandisa mari yekusvitsa. Chaizvoizvo, iwe uri kutobhadhara mari yakakwana kutenga iyo yekutsvaga muInternet. Saka sei uchifanira kuramba kubhadhara mari yakadzorerwa kwauri shure kwezvose? Ezvo Ebates inonyanya kushandiswa, ichipa bhatani rekushandura chaiyo (zvisinei, bar) kuwana chiyeuchidzo nokukurumidza kwekutenga kwose kunoda kushandura mari yakadzoka shure. Tichifunga kuti kuwedzerwa kunowanikwa mukusvikirika, munhu wangu mutengesi anozvirumbidza nechinhu chakakomba 4 000 bucks munguva pfupi yapfuura yakachengetwa mumwedzi wega wega mari inoshandiswa shure inotarisa chaizvo, yakaoma?
Yake imwezve inowedzera kune browser kunobatsira vatengesi vakawanda nevakashambadza maAmerica. Cleer Platinum inoshandiswa nyore uye inoshanda zvakanaka iyo inokwanisa kuita basa rinotyisa rekuenzanisa michina muitiro chaiyo uye uri nyore. Ichi chishanduri chinokupa mabheji akajeka pane dzimwe nguva achioneka pamapeji ewebhu ebasa revana revatengesi vakuru. Taura zviri nyore, paunoona chigadzirwa chakatengeswa, somuenzaniso paWalmart, Cleer Platinum inogona kukuratidzai zvakafanana kana zvakakwana zvakafanana zvinoratidzwa pane imwe nzvimbo paWebhu, kusanganisira Amazon pachayo, uye eBay. Chii chinowedzera - iyi browser yekuwedzera inogona kukupa imwe bhonasi, kubva pakutsvaga peji kuAmazon. Tarisa kuwanda kwekutengesa uye kuisa zvikamu - uye nguva dzose unokwanisa kukwanisa kukurumidza-kutarisa kana iwe unosangana nemirairo, uye kuziva kuti chipi chekutsvaga chinenge chakanaka kutanga kutanga.